နားလည်မှာမဟုတ်ဘူး ...မအေမီရဲ....တက်ကြွမှုကိုလေးစားပါတယ်....မအေမီရဲ.မေးလ်တွေ ကို....မပြန်ဖြစ်ပေမယ်.မလွတ်တန်းဖတ်ပါတယ်...(အားပေးပါတယ် ခင်ဗျာ..နောက်ပြီး...မအေမီလို..အွန်လိုင်းပေါါ်.မှာတက်ကြွစွာ..မိမိရဲ.မအားလပ်တဲ.အချိန်တွေစတေးပြီး...
လူတစ်ယောက်က..ကိုယ်.ကိုကိုယ်... ကုလားမဟုတ်ပါဘူးလို.ရှင်းပြနေတာကိုက ကုလားဖြစ်နေတာပါ..... နောက်တစ်ချက်က...ထွက်လာတဲ. စကားလုံးပေါ်မူတည်ပြီး ကုလားလား လူလား ဆိုတာ.... အသိညဏ်ရှိသူတိုင်းခွဲခြားနိင်ပါတယ်....
မှတ်ချက်..။ ။Mr Sit Thwe <mrsitthwe@gmail.com> ခင်ဗျာ... ဖြစ်နိင်ရင် မွတ်ဆလင်တွေ၇ဲ. ရိုင်းစိုင်းရက်စက်ခြင်းများ..၊ လူမဆန်ပုံ အစွန်ရောက်ပုံများ အားးးး ဗီဒယု ဖိုင်နှင်.သော်လည်းကောင်း ၊ ပုံများဖြင်. လည်းကောင်း ၊ စာများဖြင်. လည်းကောင်း အပြည်.အစုံ အစအဆုံး မျှဝေပေးစေချင်ပါသည်.... မျိုးချစ်စိတ်ရှိသော မြန်မာတိုင်းအား လေးစားအားကျလျှက်......
ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့နိုင်ငံတကာမှထုတ်လုပ်ထားသောစားသောက်ကုန်များတွင်ဟာလာဆိုသောအထိမ်းအမှတ်ကို အာရဗီစာအနေနှင့်သော်လည်းကောင်း...အာရဗီအသံထွက်အင်္ဂလိပ်လိုသော်လည်းကောင်းရေးထားကြတာကိုပဲမြင်ဖူးပါတယ်..မြန်မာနိုင်ငံတွင်းက ထုတ်လုပ်တဲ့စားသောက်ကုန်တွေမှာလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ...၇၈၆ ဆိုတဲ့အဓိပါယ်ဟာ ဟာလာဆိုသောအဓိပါယ်နှင့်မသက်ဆိုင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်...ပြီးတော့ ၇၈၆ ဆိုတဲ့အမှတ်အသားကို အစားအသောက်ရောင်းသောဆိုင်များတွင်သာမက ကွန်ပြူတာဆိုင်...အရောင်းပစ္စည်းဆိုင်...စာသင်ဝိုင်း စသည်များတွင်မှာပါ တွေ့ရှိရတာ အားလုံးအသိပဲဖြစ်ပါတယ်...ငါတို့တွေတော့ လုပ်ချင်သလိုလုပ်မယ်...မင်းတို့တွေလုပ်ရင်တော့အပြစ်ပြောမယ် ရှုံ့ချမယ်ဆိုပြီး တရားနည်းလမ်းမကျစွာဖြင့် ပြောကြားနေသူတစ်ဖတ်သတ်တယူသန်သမားတွေအနေနဲ့ မြန်မာတွေရဲ့ ၉၆၉ လုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာ ကိုယ့်အမျိုးကို ကာကွယ်ဖို့သက်သက်ခုခံလိုက်တဲ့ တံတိုင်းကြီးတစ်ခုအဖြစ် သမာသမတ်ကျစွာသိစေချင်ပါတယ်...ကိုစည်သူစိုးမိုးရေ....တကယ်တော့မြန်မာတွေဟာ သဘောထားအင်မတန်ကြီးပါတယ်...တော်တော်ကြီးကို လွန်လွန်းလာတဲ့အရာတွေကြောင့်သာယခုလို....(လုပ်ချင်လွန်းလို့လုပ်တာမဟုတ်တဲ့) မလွဲသာမရှောင်သာ နည်းလမ်းမျိုးကိုသုံးရတာဖြစ်ပါတယ်....လုပ်ချင်လွန်းလို့လုပ်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူး...လုပ်သင့်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီမို့ လုပ်သင့်တဲ့အရာကိုစတင်လုပ်ဆောင်နေကြရတာပါ...အားလုံးဟာငြိမ်းချမ်းစွာနေလိုကြပါတယ်...ကိုယ့်အိမ်မှာခေါင်းဆောင်သူဟာ ကိုယ်ပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်...ဒီလောက်ပါပဲဗျာ...